Soo Kordhinta Sawirrada Qorraxda 'Thomas Maher wuxuu ka caawiyaa Fannaaniinta da' yarta ah inay u beddelaan hamigooda xagga shaqooyinka | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Soo Noqoshada Sawirada 'Sun Maher' wuxuu ka caawinayaa farshaxanka da 'yarta ah inay doorkooda ka bedelaan shaqooyin
Soo Noqoshada Sawirada 'Sun Maher' wuxuu ka caawinayaa farshaxanka da 'yarta ah inay doorkooda ka bedelaan shaqooyin
Marku dhammaystiray barnaamijka Shahaadada Qalinjabinta dugsiga laftiisa, Maher waxay u keentaa nooc gaar ah xamaasad fasalka ah.
Adelaide, South Australia — Thomas Maher waa xubinta ugu yar ee shaqaalaha waxbarida ee Rising Sun Pictures Education. Adelaide asalka laftiisu waa lafdhabarta barnaamijka, isagoo dhammaystiray Shahaadada Qalin-jabinta ee Saamaynta firfircoonaanta iyo Laydhka 2017, oo la keenay iyada oo lala kaashanayo Rising Sun Pictures (RSP) iyo Jaamacadda South Australia (UniSA). Ka dib markii uu helay khibrad xirfad leh oo ah farshaxan ahaan dukaanka Adelaide VFX Resin, oo uu wax ku baray aasaaska Houdini iyo Nuke ee TAFE, Tom wuxuu ku laabtay RSP sanadkii la soo dhaafay. Laga soo bilaabo xilligaas, wuxuu kaaliye barid u noqday Dan Wills koorsada Shahaadada Qalinjabinta ee Waxqabadka Dhabta ah iyo Laydhka iyo fasallo la baray isku-darka, Rinjiga iyo Roto iyo maaddooyinka kale. Wuxuu sidoo kale farshaxan ahaan ka soo shaqeeyay istuudiyaha dhowr filim oo ay ku jiraan xannibaadda loo yaqaan 'blockbuster hit' Captain Marvel.
Tom wuxuu ku cadeeyay ardayda caan ku ah aqoonta uu u leeyahay Houdini, iskuulaadka samaynta fikradaha adag wuxuu u muuqdaa mid fudud, iyo xamaasada uu u keenayo fasalka. Isaga, wuxuu, aad ula yaabay farshaxanka rajada leh ee uu kula kulmay fasalka. Waxaan la shaqeeyay in kabadan afar fasal oo kaladuwan arday walbana wuu ka sarreeyaa wixii aan ka filayay, “Waxay si joogto ah iigu soo jiitaan kartidooda farsamo iyo farshaxanimo, iyo xawaaraha ay ku baran karaan oo ku dabaqi karaan waxyaabaha aan barano. Iyagu waa saaxiibtinimo aad u wanaagsan, qaan gaar ah oo karti leh. ”
Sida qaar badan oo ka mid ah ardaydiisa, Tom wuxuu la yaabay saameynta muuqaalka ah ee daawashada filimada asaga oo dhalinyaro ah. Wuxuu ku sameeyay aflaam gaagaaban dugsiga sare, wuxuuna ku qaatay waxbarashadiisa rasmiga ah jaamacadda Adelaide iyo TAFE SA, ugu dambeynti wuxuu qaatay shahaadada Advanced Diploma ee Screen and Media.
Intii uu ardayga ka ahaa TAFE, Tom wuxuu qaatay labo koorso oo gaagaaban oo uu Houdini ka baranayay RSP. Wuxuu ku riyaaqay khibradda si aad ah ayuu uga diiwaangaliyay barnaamijka Shahaadada Qalin-jabinta ka dib markuu qalin jabiyay. Wuxuu doortay inuu diiradda saaro sidii uu u baran lahaa Houdini inta lagu gudajiray koorsada Saamaynta firfircoonaanta iyo Laydhka wuxuuna ku sifeeyey waayo-aragnimada mid beddele ciyaarta. Kaliya kama aysan caawinin isaga inuu xirfadiisa ku aado heer cusub, waxay baray isaga sidii uu ubadkiisa u rogi lahaa mid la taaban karo, noloshiisa nololeed.
Wuxuu yidhi; “Laga soo bilaabo wakhtigii aan dhex socday, waxaan dareemay inaanan ahayn arday, laakiin aan xubin ka ahay kooxda. Shaqaaluhu waxay si adag u shaqeeyeen si ay nooga yeelaan soo dhaweyn. Farshaxanada dabaqa, oo aan ka mid ahayn shaqaalaha waxbarashadda, ayaa hoos u dhici doona oo bixin doona kaalmo iyo jawaab celin ku saabsan shaqadeenna. Waxay ahayd degdeg, waqti buuxa, shan maalmood usbuucii. Waxay ii ahayd wax xiiso leh inaad ku dhexjirto jadwalka joogtada ah ee aad runtii ku dhisi karto dardar. "
Kadib markuu dhammeystiro barnaamijka Shahaadada Qalin jebinta, Tom wuxuu qaatay dhowr bilood oo uu diray dibuheshiisiinta iyo shaqadiisa iyo wareysiga shaqooyinka, kahor saaxiibkiis wuxuu kula taliyay inuu qabto jagada farshaxanimada ee Resin. Kaalintiisu waxay ugu horreyntii ku lug lahayd qorista iyo is-qurxinta, laakiin wuxuu sidoo kale fursad u helay inuu ku dabaqi karo xirfadiisa Houdini abuurista saameynta biyaha ee taxanaha Netflix Tidelands.
Waqti yar ka dib markii uu bilaabay Resin, Tom waxaa la siiyay shaqo labaad, isagoo Houdini wax ku baraya iskuulkiisii ​​hore, TAFE. Wuxuu ka helay khibradda sida ugu xiisaha badan shaqadiisa dabaqa fanaaniinta. “Had iyo jeer waan jeclaa fikradda waxbaridda,” ayuu yidhi. "Waxay ahayd shaqo adag, laakiin waan jeclaa, gaar ahaan sida ay ugu lug leedahay Houdini, oo ah halka aan hiigsanayo."
Bartamihii sanadkii hore, booska caawiyaha barida ayaa laga furay RSP. Anna Hodge, oo maamusha barnaamijka, waxay ka fikirtay Tom, oo ay labadoodaba ka yaqiinsadeen waqtigiisii ​​RSP iyo TAFE. Wuxuu booday fursad uu ku soo noqon karo. "Waxaan ahay sida, 'Haa!' Ayuu yidhi. "Waxay ahayd wax la yaab leh inaan ku soo laabto RSP oo aad miiska dhanka kale joogtid."
La yaab maahan in Tom uu ula dhaqmayo ardaydiisa. Isagu kama weyna inta badan farshaxanimada da 'yarta ah ee fasalkiisa, oo markii uu soo galay barnaamijka laftiisa, waxaa u arkaa wax sahlan in lagu garto halganka iyo guulaha ay gaareen. Laba sano ayaa laga joogaa markii aan bilaabay shaqadaydii ugu horraysay, oo aan uga beddelay ardaydii una beddelay farshaxan gacmeed iyo macallin, ayuu yidhi. “Muuqaalka warshadaha wax badan isma badalin. Markaad dirto dalabyada, had iyo jeer ma maqashid dib. Waxay noqon kartaa mid niyad jab leh, laakiin hadda waa inaad sii wadaa sii hagaajinta xirfadahaaga oo aad mar kale codsataa. Taasi waa wax aan bartay habka adag sidaas darteedna waxaan kula talinayaa ardaydeyda inay sabir iyo adkaysi yeeshaan. Waxaan sidoo kale ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iidaystaan ​​dhammaan ilaha shaqo ee ay bixiso RSP. ”
Marka laga soo tago inuu ku dhegan yahay, Tom wuxuu kula taliyaa ardaydiisa inay si dheer oo adag uga fikiraan mustaqbalkooda. "Ka fikir doorka VFX dhexdeeda ee aad jeceshahay inaad ku sii jirtid," ayuu ku adkaystay. Bilowga, dhammaantood waxay u muuqan karaan waxoogaa isku mid ah, laakiin waxay horseed u yihiin dariiqooyin xirfado aad u kala duwan. Haddii aad qalbigaaga u dejiso inuu aakhirka noqdo qoraa, tusaale ahaan, ogow doorarka da'da yar ee u horseedaya, sida rinjiga iyo roto, oo ka shaqee sidii aad u horumarin lahayd xirfadahaas. Haddii aadan hubin halka aad rabto inaad ku dambeyso, ku qaad koorso aasaasi ah wax kasta oo yar, ama arag waxa aad ku baran karto guriga. Waxaad sida ugu dhaqsaha badan u baran doontaa waxa aadan jeclayn iyo halka aad jeceshahay. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa fikrad fiican oo ku saabsan waxa ay manfacyadu sameynayaan oo aad sifiican ugu diyaarsanaatid shaqada horumarsan.
"Haddii aad jeceshahay muuqaallada aragtida, sida aniga oo kale, waa inaad taas u raadsataa. Weligey ma jirin waqti ka fiican oo lagu noqdo farshaxanka saamaynta muuqaalka, ee Adelaide iyo adduunka oo dhan. ”
At Rising Sun Pictures (RSP) waxaan samaynaa saameyn muuqaal oo muuqaal ah oo loogu talagalay ciyaaraha waaweyn ee caalamka. Istuudiyadayada waxay hoy u tahay fanaaniinta khibradda leh ee ka shaqeeya iskaashiga si ay u bixiyaan sawirro cajiib ah. Diirada saaridda soo saaridda tayada ugu sareysa tayada iyo kuwa cusub, RSP waxay leedahay dhejin aad u jaban, dhuumaha gaarka ah, kaas oo u oggolaanaya shirkadda in ay si deg deg ah kor ugu qaaddo oo ay u hagaajiso hawsheeda shaqo si ay u daboosho baahida sii kordheysa ee dhagaystayaasha ee muuqaal cajiib ah.
Istuudiyahayagu wuxuu ku raaxeysanayaa faa iidada ku jirta in la joogo Adelaide, South Australia, oo ka mid ah magaalooyinka dunida ugu nool. Taasi, oo ay weheliso sumcaddayada qurxoon, iyo helitaanka mid ka mid ah abaal-marinta ugu weyn ee la isku halleyn karo, waxay RSP ka dhigeysaa mid soo jiidasho leh filim sameeyayaasha adduunka oo dhan. Tani waxay noo horseeday inaan sii wadno guulaha oo aan u suurtagelino RSP inay gacan ka geysato mashruucyo badan oo ay ka mid yihiin Spider-Man: Farm From Home, Captain Marvel, Dumbo, Alita: Battle Angel, Predator, Tomb Raider, Peter Rabbit, Animal World, Thor: Ragnarok, Logan, Pan, X-Men franchise iyo Game of Thrones.
Sim Post New York, Toronto iyo LA, U Diyaarso Afar Filim Madax-bannaan oo loogu talagalay Sundance Premieres - January 22, 2020
Horumarinta Muuqaalka Sawirka Suxufiyiinta (MPSE) Soo bandhigida 67th Abaalmarinta Abaalmarinta Dahabka Sanadka - January 20, 2020
Sawirada Qorraxda oo Soo Baxaya Ayaa Isweydaarsanaya Icon Auto Icon oo ah Sawirka ugu Fiican Nominee “Ford v Ferrari” - January 16, 2020
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Education Graham Chapman Prmoted toEditor COLONIE / Chicago tababarka TVU Networks VFX Raadka Visual	2019-10-08
Previous: Kaniisadda Nolosha ayaa xusha Guryaha VITEC ee Caabud-wejiga Dhirta cibaadada